Kedu mgbe oge ikpeazụ Amazon jụrụ gị onye ị bụ? Ikekwe mgbe mbụ ị debanyere aha gị na akaụntụ Amazon, nri? Afọ ole ka nke ahụ gara? Nke ahụ bụ ihe m chere!
Ozugbo ị banyere na akaụntụ Amazon gị (ma ọ bụ gaa na saịtị ha ma ọ bụrụ na ịbanye), ọ na-ekele gị ozugbo n'akụkụ aka nri. Ọ bụghị naanị na Amazon na-ekele gị, mana ọ na-egosi gị ozugbo ihe ndị dị mkpa: atụmatụ ngwaahịa dabere na ọdịmma gị, akụkọ nchọgharị, na ọbụlagodi ndepụta ịchọrọ. Enwere ihe kpatara Amazon ji bụrụ ụlọ ọrụ eCommerce. Ọ na-agwa gị dị ka mmadụ, na B likeGH like amasị a website… na ọ bụ ihe ọtụtụ ụdị kwesịrị ịbụ tụnyere na ha onwe ha weebụsaịtị.
Ọ bụrụ na ị chọpụtaghị, ọtụtụ weebụsaịtị nwere ebe nchekwa dị mkpirikpi. N'agbanyeghị ugboro ole ị gara na weebụsaịtị, ịnwere ike ịchọta onwe gị ka ị na-etinye ozi gị ugboro ugboro. Ọbụlagodi na ibudatara eGuide site na nzukọ (mgbe ị juputara na ozi gị), ma nweta email na-akpọ gị ka ị budata eGuide na-esote, ị nwere ike ịchọta onwe gị ka ị dejupụta ozi gị ọzọ. Ọ bụ naanị… ihere. Ya na ịrịọ enyi gị ka o meere gị amara wee sị ha “whonye ka ị bụ?” O doro anya na a naghị elelị ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ n'echiche nkịtị - mana ọtụtụ na-ewe iwe.
Dika otutu ndi mmadu, adi m nma icheta iru, ma jogburu onwe m icheta aha - ya mere ana m agbasi mbo ike icheta ha maka odi n'ihu. Ọ bụrụ na achọpụtara m na echefuola aha ha, aga m ede ya na ekwentị m. M na-emekwa ike m niile ịdebanye ozi ndị ọzọ na kọntaktị m dịka nri kachasị amasị, ụbọchị ọmụmụ, aha ụmụaka, wdg - ihe ọ bụla dị ha mkpa. Ọ na-egbochi m ịjụ ha ugboro ugboro (nke bụ nkwanye ùgwù) na n'ikpeazụ, ndị mmadụ na-enwe ekele maka mgbalị ahụ. Ọ bụrụ na ihe bara mmadụ uru, achọrọ m icheta ya. Ebe nrụọrụ weebụ gị kwesịrị ime otu ihe ahụ.
Ugbu a, ka anyị gwa onwe anyị eziokwu - ọbụlagodi na ị dee ihe niile, ị gaghị echeta ihe niile dị mkpa. Agbanyeghị, ị ga-enwe ohere dị ukwuu karị icheta nkọwa ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị nwaa. Ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị ime otu ihe - karịsịa ma ọ bụrụ na ha chọrọ ka ha na ndị ahịa na-emekọrịta ihe nke ọma, nweta ntụkwasị obi ha ma hụkwuo azụmahịa.
Ọ bụ ezie na ha bụ ihe atụ kachasị pụta ìhè, Amazon abụghị naanị weebụsaịtị akpọrọ akọ na uche. Onwere otutu ndi choro otutu ihe di nkpa mee ka ahụmịhe ha n'ịntanetị na-adọrọ mmasị ma na-echebara gị echiche. Nke a bụ ole na ole m nwere ike iwepụ ngwa ngwa:
N'ebe a na PERQ, anyị malitere iji ya Jụọ - mmemme na-achikọta nzaghachi a na-eme site na a Ntụle Ọkwá Ngwá Ọrụ site na e-mail. Maka ebumnuche anyị, anyị chọrọ ịmatakwu ihe ndị na-azụ ahịa n'eziokwu na-eche banyere ngwaahịa anyị. A na-ezigara ndị ahịa anyị nyocha dị mfe 2 dị mfe. Akụkụ nke 1 na-arịọ onye ahịa ka o nye ha ohere ịtụle anyị n'ọtụtụ na 1-10. Akụkụ nke 2 na-enye ohere maka nzaghachi mmeghe - isi jụọ ihe kpatara onye ahịa a ji họrọ ọkwa ahụ, otu anyị nwere ike isi mee nke ọma, ma ọ bụ ndị ha ga-akwado. Ha kụrụ nrubeisi, ọ bụ ya! Enweghị mpaghara iji jupụta aha ha, adreesị ozi-e, ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya. N'ihi gịnị? N'ihi na anyị na EZI emaili ha ma kwesịrị ịma onye ha bụ!
You ga-agakwuru onye ahịa nke ọnwa 6 +, onye gị na ya mebere mmekọrịta dị mma, wee jụọ ndị ha bụ? Mba! Ọ bụ ezie na ndị a abụghị mmekọrịta ihu na ihu, ọ baghị uru ịjụ ha maka ozi ị nwere. Dị ka onye nọworo na ngwụcha ozi ịntanetị ndị a, enwere m ike ịgwa gị na mgbe m ga-enye ha ozi m ọzọ, ọ na-adị m ka a na-ere m… ma cheta gị, azụọla m ngwaahịa gị . Ajula onye m bu ma oburu na imaara m.
Yabụ, ịlaghachi na AskNicely - onye ahịa pịa na email ahụ, họrọ ọnụọgụ n'etiti 1-10 wee nye nzaghachi ọzọ. A na-eziga ozi ahụ na nzukọ na-eduzi nyocha ahụ, ebe ha nwere ike ịkwado mkpa onye ahịa ahụ n'ọdịnihu. A na-etinye akara ha ozugbo na profaịlụ ndị ahịa ha.
Gbalịa nnwale efu nke AskNicely
Y’oburu n’inwe ahia, ma obu i nwe ahia eCommerce, ohere gi di nma mara onyeMpempe akwụkwọ bu. Ọ bụrụ na ị maghị,Mpempe akwụkwọ bụ ikpo okwu na-enye ndị azụmaahịa ohere ịhazi ụdị nke ha n'ịntanetị ma jikwaa data anakọtara. Ndị ahụ bụ usoro nke onye nkịtị, ọbụlagodi. Ihe ikpo okwu kariri nke ahu karie ya (dika AskNicely di), mana aga m agafe ụfọdụ njirimara nke na eme ya nnukwu ngwa oru.
Oge n'aga,Mpempe akwụkwọ emeela mgbalị iji jikọta teknụzụ nke na-enye ohere ka ụdị ọdịdị dị iche iche ghara ịpụta oke. Tinyere akụkụ nke ịhazi nhazi ihu igwe, azụmaahịa nwekwara ike ịhazi ụzọ esi egosipụta ndị ọrụ. Iji maa atụ: dabere n’otú onye ọrụ siri dejupụta fọm gara aga (ma ọ bụ ngalaba na-esote otu ụdị),Mpempe akwụkwọ ga- leverage “Ọnọdụ nhazi” iji gosipụta ajụjụ na-eme ka uche nke onye ọrụ ahụ zaa. N'ezie, enwere ike ịhapụ ịgba ajụjụ ụfọdụ kpamkpam. A na-eji “Condition Formatting” eme ihe iji nyere aka mee ka usoro ndozigharị ụdị dịkwuo elu ma mekwawanye ọnụọgụ mmecha. Mara mma, nri?
Ugbu a, dịka njikọ aka na ndị ahịa ugbu a na-aga,Mpempe akwụkwọ nwere nhọrọ nke mmejuputa atumatu “Nga-Populating Fidị Fields.” Dịka m kwuru na mbụ, ọ na-adighi mma ịjụ ndị ị nwere mmekọrịta ha bụ. Ọ dị egwu. Ma ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị naghị eche na ọ bụ "dị egwu," ndị ọbịa webụsaịtị anaghị enwe mmasị jupụta ozi kọntaktị ha niile ugboro ugboro. Maka ndị na-etinye aka na azụmaahịa gị, ịnwere ike ime ya ka a na-edepụta ozi kọntaktị ndị ahịa site na otu ụdị gaa na nke ọzọ. Ọ bụghị otu ihe ahụ ka ọ na-enweghị ụdị nke egosiri ma ọlị, mana ọ bụ nnukwu mbido.
Nhọrọ ọzọ bụ izipu ụdị URL pụrụ iche nke na-eme ụdị a ka onye ọrụ ma ọ bụ onye ahịa. A na-ahụkarị URL ndị a na "I meela" ozi ịntanetị ha na-agakarị na nyocha Nyocha. Kama mpaghara iji tinye aha, email ma ọ bụ akara ekwentị, ọ na-awụba n'ajụjụ nke mbụ. Enweghị mmeghe - naanị mmekọrịta bara uru.
Ọ bụ ezie na abụghị m onwe m Xbox onye ọrụ, Amaara m ọtụtụ ndị bụ. Otu n'ime ndị otu m, Felicia (Ọkachamara Ọdịnaya PERQ), mara mma Ugboro ọrụ. E wezụga nhọrọ dị ukwuu na egwuregwu, Felicia nwere mmasị na interface Xbox Xbox nke dị ugbu a - nke nwere nnukwu ọrụ na nke ahaziri iche.
Mgbe ị na-eji Xbox (ma ọ bụ ọbụna PlayStation, maka nke ahụ), ọ bụ omenala ịmepụta profaịlụ gamer - ma maka ọdịiche nke ndị ọrụ dị iche iche na maka ịntanetị. Gịnị bụ nifty banyere ndị a gamer profaịlụ bụ na Xbox interface na-emeso gị dị ka mmadụ. Ozugbo ị banyere, a na-ekele gị “Hi, Felicia!” ma ọ bụ “Hi, Muhammad!” na ihuenyo (ọ ga-agwa gị "Ka ọ dị!" mgbe ị na-apụ). Ọ na-agwa gị okwu dị ka a ga - asị na ọ maara gị n'ezie - na eziokwu, ọ maara n'ezie.
Nkọwapụta ọrụ Xbox gị nwere dashboard pụrụ iche na ngwa gị niile, akara egwuregwu gị niile na ndepụta ndị enyi gị niile ugbu a. Ihe kachasị dị mma banyere ikpo okwu a bụ na, yana igosi gị ihe niile na - eme ka ahụmịhe ahụ pụọ iche ma na - atọ ụtọ, sọftụwia ahụ na - anwa ịme ahụ Ọ B BLA.
Otu ihe Felicia hụrụ bụ ihe mmasi bụ na ọ na-anata egwuregwu na ngwa, Ọ B NOTGH based ọ dabere na ojiji nke aka ya, mana dabere na ihe ndị enyi ya na-eji ugbu a. N'ihi na enwere mmetụta nke obodo gburugburu ọtụtụ egwuregwu egwuregwu vidiyo, yana ọtụtụ ndị ọrụ nwere mmasị yiri nke a, ọ bụ ihe ezi uche dị na ịpụpụ ma gosi ndị ọrụ ihe ọhụụ. Ọ bụrụ na Felicia hụrụ na ezigbo ndị enyi ya na-egwu "Halo Wars 2," dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike chọọ ịzụta egwuregwu ahụ ka ya na ha nwee ike igwu egwu. O nwere ike pịa ihe oyiyi nke egwuregwu ahụ, ma jiri kaadị echekwara na profaịlụ ya ịzụta egwuregwu ahụ, budata ya wee malite igwu egwu.
Anyị abịawo ogologo, ogologo ụzọ kemgbe ụbọchị nke ụdị ugboro ugboro jupụtara, mana anyị ka nwere ogologo ụzọ anyị ga-aga. A ka nwere otutu ulo oru di na ya “nwere ego nke igba oso.” Ha na-enweta ozi, stats na azụmaahịa ha chọrọ ịkwado onwe ha - mana ha anaghị anwa ijigide ndị ahịa ahụ. Ọ bụrụ na m mụta ihe ọ bụla n'ime afọ ole na ole gara aga site na ịrụ ọrụ na PERQ, ọ bụ na ndị na-azụ ahịa na-enwe ahụ iru ala mgbe azụmaahịa zụlitere ha. Ndị ahịa chọrọ ịnabata gị - mana nke kachasị mkpa, ha chọrọ ka a ghọta ha. Ka anyị na-aghọtakwu ndị ahịa anyị na-aga n’ihu, ọ ga-eme ka ha nwee mmasị iso anyị na-azụ ahịa.
Tags: amazonjụọikempempe akwụkwọPERQPlayStationXbox